Dalka Sierre Leone oo laga mamnuucay rucleynta - BBC News Somali
Dalka Sierre Leone oo laga mamnuucay rucleynta
Image caption Magaalada Freetown
Booliiska dalka Sierre Leone ee galbeedka Afrika ayaa soo saaray amar ay dadka uga mamnuucayaan in ay waddooyinka ku sameeyaan orodka jimicsiga loogu talogalay.
War qoraal ah oo booliiska kasoo baxday ayaa lagu sheegey in dadka kooxaha ah ee orodka ku sameeya waddooyinka waaweyn ee magaalada Freetown ay dhibaato ku yihiin habsami u socodka nolosha, sidoo kale ay dadka hantidooda ka dafaan, dadkana caayaan, sidoo kalana ay ka dhawaajiyaan muusig dheer.
Iyaga oo xiganaha qodobo ka mid ah dastuurka dalka ayay Booliiska sheegeen in amarkan ay uga gol leeyihiin in ay ku illaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta.
Balse dad u hadlay ururada bulshada rayidka ayaa sheegey in talaabadan ay tahay mid ka hor imanaysa xuquuqda asaasiga ah ee dadka ee ah in ay dhaqdhaqaaq sameeyaan, iyaga oo sidoo kale farta ku fiiqay in aysan jirin wax dambi ah oo ay dadka geysanayaan.
Dad kooxo kooxo ah ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ku sameeya orodka rucleynta ah maalmaha shaqada laga fasaxanyahay.
Balse waxaa kale oo soo kordhey in taageerayaasha musharixiinta madaxtinimo ee dalkaasi ay iyaguna sidoo kale bilaabeen orod kaasi oo kale ah iyaga oo xiran funaanadaha musharaxa oo ku xardhanyihiin fariimo siyaasadeed.
Booliiska waxa ay sheegeen in qofkii sababo caafimaad u ordaya uu sidaasi samayn karo, balse waa in uu tagaa goobaha jimicsiga iyo xeebaha, waxayna ku hanjabeen in ay talaabo sharci ah ka qaadi doonaan qofkii lagu helo isagoo dariiqyada magaalada dhex ordaya.
Image caption Xeebaha Free Town
Hase yeeshee dadka qaarkood ayaa sheegaya in ay dalkaasi ku yaryihiin goobaha loo nasiino tago ama darjiinooyinka.